LASER ENGRAVING MACHINE O-C - China Shandong Oree Laser
Laser အက္ခရာ တင်. စက် OC
1.Has appreance နှင့်နည်းပညာအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မူပိုင်၏ grantted ခဲ့;
အလုပ်လုပ်အနေအထားရှာဖွေတာအတွက်အဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် 3.Red လက်ဝါးကပ်တိုင်တိကျ positioning ကို။ သုံးကြေးမုံနှင့်ထူးချွန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတဦးတည်း focal မှန်ဘီလူးလမ်းကြောင်းစနစ်က;
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တိကျမှုလက်စွဲစာအုပ်အာရုံစိုက်လေဆာရောင်ခြည်ဦးခေါင်းနှင့်အတူ 4.Equipped, စက်ပန်းပုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်, ထိုအာရုံအနေအထားထွင်းထုသည်နှင့်အညီနဲ့ Alternate ဖြတ်တောက်နှင့်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပျဉ်၏အထူချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
ရေ chiller, လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်၏ပိုကောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ 6.Equipped, လေဆာရောင်ခြည်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်
ခြေနှင့် 7.Universal ဘီးနှင့်ချိန်ညှိခွကေိုစက်ပိုမိုအဆင်ပြေပြောင်းရွှေ့စေအကူးအပြောင်း,
9.Patent နည်းပညာ: ထူးခြားတဲ့အလိုအလျှောက်တက်ခြင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး system ကိုထိုးနှက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆေးလိပ်သောက်။
The laser machine’s power is optional from 40w to 280w and different power cut different thicknesses materials
The machine can be used with two cutting countertops.
အလုပ်အဖွဲ့ဧရိယာ 1000 * 600mm 1300 * 900mm 1600 * 1000mm 1800 * 1200mm
Laser Output Power 80w/100w/120w/150w/180w 80w/100w/120w/150w/180w 80w/100w/120w/150w/180w 80w/100w/120w/150w/180w
တိကျပြတ်သားမှုတည်နေရာ ≤ + 0.01mm ≤ + 0.01mm ≤ + 0.01mm ≤ + 0.01mm
min ။ ထွင်းထုအရွယ်အစား English Letter. 1.0mm*1.0mm English Letter. 1.0mm*1.0mm English Letter. 1.0mm*1.0mm English Letter. 1.0mm*1.0mm
ထွင်းထုမြန်နှုန်း 0-20000mm / မိနစ် 0-20000mm / မိနစ် 0-20000mm / မိနစ် 0-20000mm / မိနစ်
အအေးအမျိုးအစား ရေအအေးခံခြင်း ရေအအေးခံခြင်း ရေအအေးခံခြင်း ရေအအေးခံခြင်း
Cooling Software DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
အမြင့်ဆုံးကိုစကင် Precision 2500DPI 2500DPI 2500DPI 2500DPI
ယခင်: ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-P ကို
နောက်တစ်ခု: FLATBED အက္ခရာ တင်. & ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OB
ပုံစံ OC 1006 OC 1309 OC 1610 OC 1812
လေဆာပါဝါ 80W / 100W / 120W / 150W / 180W
လေဆာအမျိုးအစား CO2 ချိတ်ပိတ်လေဆာ Tube, 10.6μm
ထွင်းထုမြန်နှုန်း 0-60000mm / မိနစ်
လေဆာ Output ထိန်းချုပ်ရေး Software က Set 0-100%
min ။ ထွင်းထုအရွယ်အစား တရုတ်: 2.0mm * 2.0mm; အင်္ဂလိပ်ပေးစာ: 1.0mm * 1.0mm
အမြင့်ဆုံးကိုစကင် Precision 2500DPI
တိကျပြတ်သားမှုတည်နေရာ ≤ + 0.01mm
ထိန်းချုပ်ခြင်း Software များ DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
ဂရပ်ဖစ် Format ကိုထောက်ပံ့ စသည်တို့ကိုပညာ,, PLT, BMP DXF, DWG, AI အ, Las,
လိုက်ဖက်တဲ့ Software များ TAJIMA, CORELDRAW, Photoshop, AutoCAD, အဝတ်ကိုဝတ်ဆင် AutoCAD Softwares တွေအားလုံး TYPE
Drive ကိုစနစ် high-တိကျစွာ Stepper မော်တော်
auxiliary တပ်ဆင်ခြင်း အိပ်ဇောဝါသနာရှင်နှင့် Air အိပ်ဇောပိုက်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC110V / 220V, 50HZ / 60HZ 10% ±
အလုပ်အဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်: 0-45 ℃, Humidity5-95% (အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေ)
option Up ကို & Down စားပွဲတင်, Blade ကို Worktable, Honeycomb Worktable, Rotary စက်ပစ္စည်း, Red Dot ရာထူးစနစ်, auto-focus ကိုစက်
ပစ္စည်း ဖြတ် ပုံထွင်း
acrylic, Plexiglass, PMMA, Perspex, အော်ဂဲနစ်ဘုတ်အဖွဲ့, နှစ်ချက်အရောင်ပြား √ √
ပလပ်စတစ်, PP, PET, PC မှာ, PMMA, PS, PES, PA, ပလပ်စတစ်သတ္တုပါး & ရုပ်ရှင်, Polycarbonate, polyester သို့မဟုတ် Polyimide အမြှေးပါး Keyboards √ √
သစ်သား, ဝါး, Veneer, MDF, Blasa သစ်သား, အထပ်သား √ √
သားရေ, ဝက်သားရေ, နွားသားရေ, သိုးသားရေ √ √
အထည်အလိပ်, လဲမှို့, ပိုး, ခံစားခဲ့, ဇာပန်းထည်, Synthetic & နည်းပညာ•အထည်အလိပ်, Aramid, polyester, မွေး √ ×
foam & Filter ကို, ဖျာ polyester (PES), Polyethylene (PE), Polyurethane (ထိုနေ့ကိုပု) × ×
စက္ကူ, Cardboard, Chipboard, စာနယ်ဇင်းဘုတ်အဖွဲ့ √ √
ကျောက်ခေတ်, ကြွေ, ကျောက်, စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း, သဘာဝကျောက် Pebble ကျောက်ခေတ်, Slate × √
ရော်ဘာ Stamps, Synthetic & Silicon ရော်ဘာ, သဘာဝရော်ဘာ, Microporous ရေမြှုပ် √ √
silicone ရော်ဘာ, Synthetic ရော်ဘာ √ √
Glass ကိုနှိပ်မည် Glass ကို, ဖန်, Crystal Glass ကို, ကြေးမုံ Glass ကို Float လုပ်မလဲ × √
100w လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
20w လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
80 Watt လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
acrylic လေဆာအက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
acrylic Wood ကအက္ခရာ တင်. စက်
CNC လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်.
CO2 Mini ကိုလေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း
စိန်လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
ဖိုက်ဘာလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
မြင့်မားသော Precision လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
High Quality လေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း
High Quality လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်များ
ရောင်းရန်လက်ဝတ်ရတနာအက္ခရာ တင်. စက်
လေဆာအက္ခရာ တင်. ပစ္စည်း
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက် 40w
သတ္တုသည်လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်သတ္တု
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက် Wood က
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်များ
လေဆာ Engravinging စက်
သတ္တု လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
Mini ကိုလေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း Cutter
Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်စျေး
Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်. Wood ကစက်
အိတ်ဆောင်လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
အိတ်ဆောင် Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
အသေးစားသတ္တုအက္ခရာ တင်. စက်
Mach ဖြတ်တောက်ခြင်း Metal & NONMETAL FLATBED laser ...
Micro laser အက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OM
high-PRECISON Metal & non-metal laser CUTTIN ...
Metal & NONMETAL laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine အို-CM
FLATBED အက္ခရာ တင်. & ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OB